Moodada astaamaha toosan: Isku-dubaridka 40 soo jeedin dhiirrigelin ah | Abuurista khadka tooska ah
ka astaamo toosan Iyagu waa isbeddello iyo laga yaabee inay yihiin mid ka mid ah matalaadaha ugu madmadowga badan adduunka ee naqshadda aqoonsiga shirkadeed oo aan kuu sharaxo. Naqshadayntu waxay u egtahay inay u janjeerto dhanka ugu yar iyo fudeydka guriga. Si kastaba ha noqotee, iskudhafka qadka toosan ayaa mararka qaarkood ka hor imanaya mabda 'waxaana lagu muujiyey qaab dhismeed aad u adag oo leh qurxin xad dhaaf ah iyo xariijin. Runtii tani wax fiican ma noqon kartaa? Marka la eego ficil ahaan tani waxay noqon kartaa caqabad sababtoo ah waxa ku saabsan waa in la qorsheeyo wax aad u fudud oo ay indha bini-aadamku ku arki karaan muddo gaaban. Wax la garan karo marka la jaleeco. Haddii aan naqshadeyno astaan ​​baroque ah oo leh tiro aan la koobi karayn oo ah walxaha iyo qaybaha, waxaan dooneynaa in dadweynaha ay joojiyaan oo ay baaraan gabalka tanina waligeed fiicnaan mayso, sidaa darteed waxaan hubaa inaan doorbidayo naqshadaha ugu fudud ee dabeecadooda wax ku oolka ah.
Waa kuwan tusaalooyin ka mid ah labada qaab. Waxa iska cad ayaa ah in soo jeedinta noocan ahi ay soo bandhigeyso hodonnimo qurux badan iyo nadiifin iyo dhameystir sax ah. In kasta oo aan kaaga tagayo xulasho 40 soo jeedin ah, haddana hoosta waxaan ka soo jeedinayaa Tumblr ah mid aad u xiiso badan oo keydiya galaal aad u weyn oo leh tusaalooyinka noocan oo kale ah oo aad u dhiirrigelin ah. Ayaa lagu magacaabay Astaanta Cilmiga Khadka oo waad eegi kartaa laga soo xigtay. Adiguba ma naqshadeyneysaa astaan ​​noocan ah? Ma qabatay mashaariic noocan ah? Noo tus iyaga aagga faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Moodada astaamaha toosan: Isugeynta 40 soo jeedin dhiirigalin ah
Yaad ku mahadsan tahay sheegista: 3 Independiente.mx
Ku jawaab nods